Calamada Ilmoland – England, Scotland, Finland, Iceland,Switzerland, Somaliland, & Puntland – oo kan Puntland ugu Foolxun Yahay!. | Halganka Online
Calamada Ilmoland – England, Scotland, Finland, Iceland,Switzerland, Somaliland, & Puntland – oo kan Puntland ugu Foolxun Yahay!.
Horay waxaan u soo sheegay in calanka Shabaabku ugu qiimo badan yahay uguna qadiimsanyahay calamada hadda la isticmaalo. Waddamadaas iyo gobolladaas kor ku xusan waxaa ugu magac xun Puntland! Sababtuwaxay tahay magacyada qaar waxay tusayaan magaca dadka u dhashay waddamadaas sida England, Scotland iyo Somaliland laakiin lama garanayo waxa “Punt” laga wado.“Punt” oo la garanayn waxaa lagu xoojiyey kalmad qalaad “land”!
Magacyada waddamadaas kore (Somaliland & Puntland ma aha waddamo) ee Yurub ku yaal waxaa astaan u ah Macatabka Kiristaanka ama dheh Laanqeyrta. Bal hoos ka fiiri:
ENGLAND FINLAND ICELAND SCOTLAND
Waad aragtaan sida waddamadaas “horay-u-maray” oo ku yaal Yurub u qiimeeyaan waxa ay diin ahaan u aamisan yihiin. Bal aan eegnno sida gobolladeenna Somaliland iyo Puntland ugu kalsoonaan waayeen Astaanta diinteenna Islaamka. Aan eegnno calanka Somaliland:
Waddamaas reer Yurub oo kore waxay ku kalsoon yihiin calankooda. Sida Shabaabka u wato calan madoow oo Towxiid ku qoranyahay ayey iyaguna hal midab iyo Laanqeyrta Kiristaanka ku kaaftoomeen marka laga reebo Iceland oo labo Laanqeyr oo midi caddahay is dhexgelisay. Qofkii sameeyey calanka Somaliland waa ku kaaftoomi waayey Towxiidka. Waxay keeneen xiddig madow iyo midabbo seddex ah. Ma weydiin waxay ka wadaan laakiin waxaan qiyaasayaa inay dhihi doonaan hadaladdii caanka ahaa sida: cagaarka waxaa laga wadaa barwaaqo. Caddaanka: nabad. Guduudka/casaanka: dhiig baa loo soo daadiyey sida SNM! Saan horay u sheegay, Towxiidkii waxaa la dhigay meel uusan u qalmin. Marka wax la isku qaso faa’iido ma keenaan. Marka gaaladii waxay ku ekaatay Laanqeyrtooda laakiin Somaliland waa ku filnaanwaayey Towxiidkii!
Sida Puntland macageedu ugu liito ayaa calankeedu u liitaa. Bal hoos ka eeg:
Mar kale waa taan niri waddamadaas Yurub waa ku qanceen Macatabkooda ama Laanqeyrtooda. Somaliland wax bay isku qaseen halka Puntland ka raadgateen Towxiidkii. Calankaan horteenna ka muuqda wax raad ah oo diin ku shaqo leh laguma arko. Iskadaa Towxiidkiiye waxay xitaa yareeyeen calankii Soomaalidu samaysatay. Inkastoo xiddigta caddeeyeen waxay kan Somaliland la qeybsadeen midab cad iyo mid cagaaran. Waxaan filayaa inay sida kale ka wadaan waxaan horay u xusnay.
Gaal dil gartiisana sii! Calamada waddamaas Yurub waa ka macquulsan yihiin kan Puntland iyo waliba kan Soomaaliya! Sabab? Iyagu waxay Macatabka ka wadaan arrin diimeed oo intooda badan la xiriira dagaal ay u galeen inay difaacdaan waxay aamisnanyihiin iyo dalkooda. Markaad akhriso sababta ay astaan uga dhigteen Mucatabka/Laanqeyrta ayaad ogaan doonnaa. Nasiibdarro, Gaaladu waxay leeyihiin Laanqeyrta Cas halka innagu aynnu leennahay Bisha Cas! Labada sanam, waxaa macquulsan kan gaalada!.
Maalmo la lahaa waxaa loo tartamayaa qofka ku guuleysta inuu keeno calanka Puntland baan is iri: culumada iyo ducaada ka soo jeedda Puntland baa dadka uga digaysa waalidaas ku dhacday. Nasiib darro weli kuma arag boggagga Puntland taageera wax culumo ama ducaad ah oo arrinta saas u wayn ka hadlaysa. Marka dadka Soomaaliyeed waa lagu diray diintooda. Haddaba su’aasha aan weydiinayo shacabka Soomaaliyeed ooy ku jiraan kuwa ka soo jeeda Puntland iyo Somaliland waan inaan kala dooranno calamadan. Marka keed dooraneysaan?.
Waxaad arkaysaa ducaad iyo culumo mar kasta ku taagan qamiis/thoob oon dan ka lahayn waxa calanka looga dhigayo dadka masaakiinta ah. Waan ognahay calanku ka muhiimsan qamiis la qaato. Waxaan ka wadaa waxaynnu qaadan karnaa labo go’ iyo dhar kaloo waafaqsan sharciga.Laakiin waa doqonnimo in dadka loo sheegiwaayo in la qaato calankii nabiga (SCW). Marka Puntland, Somaliland, Soomaaliya iyo muslimiintaba waxaan u doori lahaa Calankaas Madoow.
WA SALALLAAHU CALAA NABIYAA MUXAMADIN WA CALAA AALIHI WA SAXBIHI WA
« Maamulka Islaamiga ah ee Wilaayaadka Bay iyo Bakool oo Degmada Ufurow ku qabtay Munaasabad ay boqollaal qof ka soo qeybgaleen iyo Dhoolatus Milatari oo lagu soo bandhigay Munaasabaddaas. Camal Istish-haadi ay Ku Bakhtiyeen 16 Mukhaabaraadka CIA-da Marekanka »